Posted by Two Lwin at 5:46 AM Links to this post
Posted by Two Lwin at 9:37 AM Links to this post
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ - ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့
သဗ္ဗညုတဥာဏ်ရှင် ဘုရားသခင်အဖြစ်သို့ ဆိုဒ်ရောက်တော်မူသည်မှ စ၍
အောက်ပါ မြို့ရွာဒေသများ၌ ၀ါကပ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
Posted by Two Lwin at 10:22 AM Links to this post
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျာ.. ကျနော် Template ပြောင်းရင်းနဲ့ ရေးချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ ဒါလေး တင်လိုက်တာပါ။ ကျနော်က Template ကို အမြဲတမ်းလိုလို ပြောင်းပြောင်းနေတတ်တော့ တစ်ခါပြောင်းတိုင်း widget တွေကို ပြန်ပြန်ထည့်ရတာတွေ ရှိတယ်။
အဲဒီအခါကျရင် ပြန်ပြန်ရှာရပြန်ရော.. နောက်တခါလည်း ပြန်ရှာရအုံးမှာပဲလေ။ အခု ပြန်မရှာချင်တော့လို့ ကိုယ့်ဘလော့မှာကို တင်ဖို့ စိတ်ကူးလိုက်တာပါ။ တခြားဘလော့တွေမှာလည်း ဒီ widget လေးထည့်ပုံကို ရေးထားကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုဟာလေးကတော့ တခြားဟာတွေနဲ့ မတူဘူးဗျ။ နည်းနည်းအလုပ်ပိုတယ်။ အများအားဖြင့် သုံးကြတာတွေကတော့ page element ကိုခေါ်ပြီး HTML/Java Script နဲ့ပဲ ထည့်ကြတာများတယ်။ အခုဟာလေးကတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး..
ကျနော်တို့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ Blogger.com ကိုတော့ ၀င်ရမှာပေါ့ဗျာ။
Posted by Two Lwin at 10:23 AM Links to this post
sc maung ဆိုဒ်လေးကိုလာလည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်က အခြေခံသမားလေးပါ အခုမှလေ့လာသင်ယူနေဆဲပါ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့အခက်အခဲလေး တခုခုပြေလည်သွားမယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာနေမှာပါ.. ဆက်သွယ်ရန် TWOLWIN@GMAIL.COM
Posted by Two Lwin at 8:45 AM Links to this post
Posted by Two Lwin at 5:08 AM Links to this post
ရောဟိတနတ်သားက မြတ်စွာဘုရားကို လျှောက်ထားတယ်။ “ဘုန်းတော်ကြီးသောမူသော မြတ်စွာဘုရား ပဋိသန္ဓေနေရတဲ့ ဆင်းရဲလည်း မရှိ၊ အိုရ -နာရတဲ့ ဆင်းရဲလည်း မရှိ ၊ အမြဲမကွာ ချမ်းသာနေတဲ့ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ရန် အဘယ်သို့ မှန်ကန်သော လမ်းခရီးဖြင့် သွားရပါမည်နည်းဘုရား” ဟု လျှောက်ထားတယ်။
Posted by Two Lwin at 3:38 AM Links to this post
လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာ နဲ့ဆော့ဝဲမျိုးစုံကို အောက်ကအကွက်မှာ နာမည်ရေးပီးရှာလိုက်ပါ
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)မှာ အသစ်တင်တိုင်း Facebook ပေါ်ကဖတ်ချင်ရင် Like ကိုနှိပ်ခဲ့ပါ
Powered by Cincopa Video Streaming Hosting solution.New Gallery 2014/8/14height 400width 300originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 214width 300originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 300width 269originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 300width 225originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 300width 257originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM
၀ါသနာတူသူငယ်ချင်းများ နှင့် ဖတ်ရှုအားပေးကြသော ညီအကိုမောင်နှမ မန်ဘာဝင်များ
လတ်တလော လူဖတ်အများဆုံး ပိုစ်များမှာ
TEMPLATE မျိုးစုံ စုစည်းပေးထားပါတယ်။ဒီ LINK မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။။PASSWORD=WWW.SCMAUNG.COM
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအဖျက်သဘောနဲ့မေးခွန်းတွေမေးလာခဲ့ရင်ပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ရန်အတွက် ဒီပိုစ့်ကိုထပ်ဆင့်မျှဝေပေး လိုက်သည်..။။
ရောဟိတနတ်သားက မြတ်စွာဘုရားကို လျှောက်ထားတယ်။ “ဘုန်းတော်ကြီးသောမူသော မြတ်စွာဘုရား ပဋိသန္ဓေနေရတဲ့ ဆင်းရဲလည်း မရှိ၊ အိုရ -နာရတဲ့ ဆင်းရဲလည်း ...
tittle bar B icon နေရာမှာတခြားiconပုံလေးတွေနဲ့ အစားထိုးခြင်း
B Icn နေရာမှာ animated favicon လေးတွေပြောင်းချင်ရင် ဒီ link မှာ code သွားယူပါ။
ဒီ link မှာယူပါ
၁။ နာမရူပံ-ပရိစ္ဆေဒံ၊ တပ္ပစ္စယ ပရိဂ္ဂဟံ၊ တံ သမ္မသနံ ဥဒယ-ဗ္ဗယဉာဏဉ္စ ဘင်္ဂဂံ။ ၂။ ဘယဉာဏံ အာဒီနဝ-ဉာဏဉ္စ နိဗ္ဗိဒံ အထ မုဉ္စိတုကမျတံ ပဋိ-သင်္ခံ သင်္ခ...
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ - ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့ သဗ္ဗညုတဥာဏ်ရှင် ဘုရားသခင်အဖြစ်သို့ ဆိုဒ်ရောက်တော်မူသည်မှ စ၍ အောက်ပါ မြို့ရွာဒေ...
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျာ.. ကျနော် Template ပြောင်းရင်းနဲ့ ရေးချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ ဒါလေး တင်လိုက်တာပါ။ ကျနော်က Template ကို အမြဲတမ်းလိုလိုေ...
sc maung ဆိုဒ်လေးကိုလာလည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်က အခြေခံသမားလေးပါ အခုမှလေ့လာသင်ယူနေဆဲပါ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့အခက်အခဲလေး တခုခ...
ရေးသားခဲ့သမျှ လူဖတ်အများဆုံး ခေါင်းစဉ်များမှ
Phone Game လိုချင်ရင်
ဂျာနယ် Download ယူရန်
မျိုးဆက်သစ် အွန်လိုင်းပရဟိ ဆိုင်ရာများ
သြော်....လူ့ပြည်လောက လူ့ဘ၀ကား အိုရနာရသေရဦးမည် မှန်ပေသည်တည်း။ သို့တပြီးကား..... သင်သေသွားသော် သင်ဖွားသောမြေ၊ သင်တို့မြေသည်၊ အခြေတိုးမြင့်၊ ကျန်ကောင်းသင့်၏။ သင်၏မျိုးသား၊ စာစကားလည်း၊ ကြီးပွားတိုးမြင့် ကျန်ကောင်းသင့်၏။ သင်ဦးချ၍ အမျှဝေရာ စေတီသာနှင့်၊ သစ္စာအရောင် ဥာဏ်တန်ဆောင်လည်း ပြောင်းလျက်ဝင်းလျက် ကျန်စေသတည်း။ (ဇော်ဂျီ)
window9(64)big
Powered by Cincopa Video Streaming Hosting solution.New Gallery 2014/8/14buddhaheight 522width 403originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMbuddhaheight 266width 403originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMbuddhaheight 139width 110originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMbuddhaheight 397width 403originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMvillageheight 470width 403originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM
Powered by Cincopa Video Streaming Hosting solution.New Gallery 2014/8/14height 400width 300originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 300width 225originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 300width 269originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 214width 300originaldate 1/1/0001 6:00:00 AMheight 300width 257originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM
go to the websites knowledge alwamthamar lwinminbo ရေးရန် ရေးရန် ရေးရန် ရေးရန်
scmaungမှ လာရောက်လည်ပတ်ကြည်ရှု့သူများအား ကျန်းမာပါစေကြောင်း မေတ္တာပို့သလိုက်ပါ၏ ကျန်းမာချမ်းသာလို့ အစစအဆင်ပြေကြပါစေ
sc maung ဆိုဒ်လေးကိုလာလည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဉာဏ်စဉ် ၁၆...
tittle bar B icon နေရာမှာတခြားiconပုံလေးတွေနဲ့...
တေးသီချင်းများတောင်းဆိုလိုပါက songrq4radio@mumcrew.net ကို gtalk တွင် add၍ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်
မြန်မာ unicode ယူရန်
ကျွန်တော်လည်းအခြေခံသမားလေး တစ်ယောက်ပါ။လေ့လာနေဆဲပါ ။စန်းတ၀ါးဝါးလမ်းလျှောက်ရင်းလမ်း မပြောက်အောင်ကြိုးစားနေသူပါ ပြန်လည်မျှဝေရင်း ကြိုးစားသင်ယူနေမှာပါ။ လမ်းမှားပြီးရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေများကို welcome to sc maung
4| | |scmaung| | |3
ကြိုဆိုပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့welcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaungwelcome to scmaung
As you can see, once there's enough text in this box, the box will grow scroll bars... that's why we call itascroll box! You could also place an image into the scroll box.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ppppppppppppppppppppppppppppppp
We have addedabackground color to this HTML scroll box. This is done using the CSS 'background-color' property.
သူငယ်ချင်းတို့ရေးချင်တာတွေ ရေးသွားပါ..... (ဆဲဆိုချင်းသည်းခံပါ.....)
I will try heard everytime.Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...Falling text...
Here is the normal flow of content...
...and here is more content...
လိုချင်တာ ရှာဖွေဖို့ အတွက်ခေါင်းစဉ်
အောက်ကcbox လေးထဲမှာအမှတ်တရ အမှာစကား လေးများ ပြောကြားခဲ့နိုင်ပါသည်
သင်ရေးချင်သောစာအောက်သို့ချလိုသောစာ သင်ရေးချင်သောစာအပေါ်သို့တင်လိုသောစာ သင်ရေးချင်သောစာ သင်ရေးချင်သောစာ သင်ထည့်ချင်သောစာ သင်ရေးချင်သောစာ
လာရောက်လေ့လာလည်ပတ်ခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်းတို့ ၏ အမှတ်တရ စကားများ
scmaungdesign. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.